Sprinter nifandona tamin’ny kamiaobe…: valo namoy ny ainy, zandary ny iray, 12 naratra mafy | NewsMada
Sprinter nifandona tamin’ny kamiaobe…: valo namoy ny ainy, zandary ny iray, 12 naratra mafy
Par Taratra sur 08/01/2022
Ankoatra ny zandary iray avy namita iraka, mpandeha 7 no namoy ny ainy, 12 kosa naratra mafy. Ireo no vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tao Ankarimaso, Ifanadina (RN 25), omaly maraina. Fifandonan’ny taksiborosy Sprinter sy kamiaobe iray no niteraka ity loza nahatsiravina ity.
Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny zandary ao Ifanadiana, taksiborosy Sprin­ter an’ny kaoperativa Besady ity namoa-doza ity. Taksibo­rosy mampitohy an’i Toama­sina sy Vangain­drano. Niala tao Toamasina, afakomaly hariva, ny taksiborosy iray nitondra ireo mpandeha hihazo an’i Farafangana sy Van­gaindrano, kanjo nisy fahasimbana tampoka ilay fiara ka voatery nafindra tamin’ity taksiborosy namoa-doza ity ireo mpandeha rehetra tao amin’ilay taksiborosy voalohany. Nitohy ny lalana ka teo amin’ny 3 km tsy hidirana an’Ifana­diana teo amin’ny fidinana Ankarimaso no nifanena tamin’ilay kamiaobe ilay taksiborosy ka somary nangalatra lalana, afaka tao anaty fiolahana mampidi-doza ny lohan’ilay kamiaobe raha notsenain’ny vatabeny kosa ilay taksiborosy ka tafapitika sy tafahodina vao nivadika tamin’ny sisin-dalana. Mafy ny fifandonana satria olona fito maty tsy tra-drano. Isan’izany ny zandary iray avy namita iraka tany Toamasina ka hitidi-doha ho any Vangaindrano sy ankizy roa. Marihina fa nahitana zandary efatra tao amin’ity taksiborosy ity ka iray namoy ny ainy, roa naratra, iray tsy naninona.
Matetika ahitana loza io toerana io…
Nandray ny andraikiny avy hatrany, manoloana izao lozam-pifamoivoizana izao ny mpiasan’ny fahasalamana ao amin’ny CHRD II, Ifanadina. Nomena ilay antsoina hoe “vonjy aina” (premier soin d’urgence) avokoa ireo mpandeha 12 naratra. Io, ilay fomba fiasa vaovao eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamana manoloana ny tranga tahaka izao. Ny roa tamin’ireo naratra izay tsy vita tao an-toerana, nentina any amin’ny hopitaly Tambohobe, Fiana­rantsoa.
Tonga teny amin’ny toerana nitrangan’ny loza ny zandary sy ny polisy nifanome tanana tamin’ny famoahana ireo naratra tao anaty fiara. Fan­tatra fa isan’ireo maty tamin’ity loza ity ny mpamilin’ilay Sprinter. Potika tanteraka ilay taksiborosy, nisy tamin’ireo mpandeha nosokirina tao anaty korontambin’ny fiara. Matetika ahitana lozam-piarakodia eo amin’ity lalana ity satria maro ireo fiara mifamezivezy nefa ny lalana tery, manginy fotsiny ny fandehanana mafy. Mbola mitohy ny fanadihadiana ataon’ny zandary ao Ifanadiana. Olana tamin’ity loza ity koa ny tsy fahafantarana ny mombamomba ireo mpandeha satria tsy nisy fanoratana ny anaran’izy ireo teo am-pamindrana tao Antsampanana Brickaville. Andrasana ao amin’ny tranompokonolona ao Ifanadiana ny razan’ireo niharam-boina.